Mpivady maro, te-hampivelatra ny fiainany akaiky, manomboka manandrana mandry any am-pandriana. Noho izany, misy fanontaniana maro momba ny fomba samihafa, ny teknika sy ny fahatsapana. Ny iray amin'ireo lohahevitra manan-danja indrindra - dia mampalahelo ny manao firaisana ara-nofo sy ny fomba hiomanana amin'ny fifandraisana toy izany. Androany dia misy sehatra maro ao amin'ny aterineto natokana amin'io olana manokana io, noho izany dia ilaina ny mijery izany amin'ny antsipiriany.
Nahoana no malahelo ny fanaovana firaisana ara-nofo?
Ny fiaraha-mikorana akaiky, na ny fanaovana firaisana ara-nofo na ny analizy, dia mitaky fanomanana. Voalohany indrindra dia mitaky ny fahatsapana ara-tsaina izany. Samy mila miomana amin'ny fanandramana hanao firaisana ny mpivady, ary tokony hodinihina amim-pitandremana ny zava-drehetra. Mba hahalalanao ny antony mahatonga ny fahantrana amin'ny taovam-pananahana, tokony hanontany ny hevitry ny olona manao firaisana ara-nofo ianao. Saika ny iray amin'izy ireo dia miteny fa ny fanaintainana dia mety hitranga noho ny tsy fahampian'ny traikefa sy ny tsy fahaizana. Raha manaraka ny fitsipika rehetra momba ny vanim-potoana fanomanana sy ny fizotrany ianao, dia azo tsapaina amin'ny dingana voalohany, tsy fahampiana kely ihany, izay mandalo haingana. Maro no mitaraina fa mampalahelo ny mandeha any amin'ny toeram-pivoahana aorian'ny firaisana ara-nofo. Milaza ny manam-pahaizana fa ny fitarainana ataon'ireo mpiara-miasa, izay mitarika ho amin'ny ratra.
Fiomanana amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo
Vehivavy maro no nanamafy fa ny fanandramana hanao firaisana ara-nofo amin'ny sambon-danitra voalohany, dia naratra, saingy amin'ny ho avy, raha jerena ny fahadisoana rehetra, dia tsy nahatsapa ny tsy fahampiana.
It is recommended to buy a grease specialist in advance, which can be found in a pharmacy or a store intimate. Ity fitaovana ity dia hanampy amin'ny fampihenana ny fanaintainana, hanatsarana ny fahasitranana ary hampihenana ny loza mety hiteraka. Tsy manolo-kevitra ny hanolo ny lobolobo miaraka amin'ny menaka na dibera tsy tapaka.
Ora vitsivitsy alohan 'ny fijanonana akaiky dia mendrika ny manamboatra toeram-pivoahana ny tsinay.
Azonao ampiasaina koa ny fimailo, izay manana milina fanosotra.
Alohan'ny hanaovana ny dingana, ilaina ny mamorona fanokafana anal. Mba hanaovana izany, dia manaova fangaron-tsigara sy manasa azy.
Ny psikology lahy mifandraika amin'ny vehivavy
Firy taona no afaka manoroka anao?
Phytonefrol - torolàlana ampiasaina
Fanentanana amin'ny fitsanganana amin'ny fitsaboana - fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Miomana amin'ny taona vaovao
Soup of chanterelles - fomba tsara indrindra mahasalama ireo fomba fitsaboana voalohany amin'ny holatra
Ahoana no hanapahana bangoroa?
Balsamine - mitombo amin'ny voa, rehefa mamboly voaloboka, ireo fitsipika fototra momba ny fikarakarana
Ny fomba hanadiovana sy hanasa zavatra (tsara, na saika ny zava-drehetra)
Ohatrinona ny siramamy ao amin'ny pastèque?